श्रीदेवीकि छोरी जनविले कसरि मानीन आफ्नो जन्मदिन ? - InHeadline
श्रीदेवीकि छोरी जनविले कसरि मानीन आफ्नो जन्मदिन ?
By Anu Rana on Mar 07,2018 - 15:50
बलिउड सुपरस्टार अभिनेत्रीको रुपमा चिनिने श्रीदेवीको गत हप्ता निधन भएको थियो। श्रीदेवीका दुई छोरीहरु मध्ये जेठी छोरी जाह्रवीको आज जन्मदिन हो। श्रीदेवीको छोरी जान्वी कपूर आजदेखी २१ बर्षकी भएकी छिन् । ७ मार्च १९९७ मा मुम्बईमा जन्मिएकी जान्वीले आमाबिना मनाएको यो पहिलो जन्मदिन हो ।
जान्भिले आफ्नो जन्म दिन मनौने तरिका उस्को आमा बाट सिकेको थिन किन्की उस्को आमा श्री देवी पनि हरेक जन्म दिन वृद्धाश्रम गएर मनौने गर्थिन । त्यसैले यो चोतिको जन्म दिन जन्भिले पनि उस्को आमा बिना नै वृद्धाश्रम म गएर मनएकी छिन ।
आमाको पदचाप पछ्याउदै बलिउडमा डेब्यु गर्न लागेकी जान्वीको आज २१ औं जन्मदिन हो। आमाको देहान्त भएको एक हप्तापछि परेको आफ्नो जन्मदिनमा जान्वी निकै साहसका साथ घरबाहिर निस्किएकी छिन्।
जान्वीको जन्मदिनमा उनको कजन दिदी सोनम कपूरले उनलाई विस गरेकी छिन् । सोनमले इंस्टाग्राममा जान्वीको फोटो अपलोड गर्दै लेखेकी छिन्, ‘मलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा बहादुर केटी आज महिला बनेकी छिन् ।’
भारतीय मिडियाका अनुसार जान्वीको बर्थडेमा बुवा बोनी कपूरले सानो डिनर पार्टीको राख्नेछन् । जबकी यसमा परिवारका सदस्यहरुमात्र हुनेछन् । श्रीदेवीको ईच्छा छोरीको जन्मदिन धुमधामसँग मनाउने थियो । साथै बोनी पनि जान्वी आमाको मृत्युको शोकबाट चाँडैनै बाहिर आओस् भन्ने चाहान्छन् ।
ट्याग - जाह्रवीको आज जन्मदिन , जान्वीको बर्थडेमा बुवा बोनी कपूरले सानो डिनर पार्टी